Manchester City Oo Bartilmaameed Sare Ka Dhiganaysa Mikel Oyarzabal Oo Ka Tirsan Real Sociedad
HomeWararka CiyaarahaManchester City oo bartilmaameed sare ka dhiganaysa Mikel Oyarzabal oo ka tirsan Real Sociedad
September 15, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester City ayaa u aqoonsatay garabka Real Sociedad Mikel Oyarzabal bartilmaameedka koowaad ee suuqa kala iibsiga xagaaga 2022, sida lagu sheegay warbixin.
24 jirkaan ayaa ka soo dhex baxay darajooyinka dhalinyarada Sociedad wuxuuna ku riyaaqay ololihii 2020-21, isagoo diiwaangeliyay 11 gool iyo sideed caawin 33 kulan oo La Liga ah.
City ayaa lacag rikoor ah oo suuqa kala iibsiga ah ka bixisay lacag dhan 100 milyan oo Ginni si ay Jack Grealish uga hesho Aston Villa suuqii ugu dambeeyay, waxaana la filayaa in kooxda Pep Guardiola ay suuqa u gasho weeraryahan cusub marka uu dhammaado xilli.
Si kastaba ha ahaatee, Eurosport ayaa sheeganeysa in Oyarzabal – oo u badan garabka bidix – uu ku jiro radarka madaxda City, kuwaas oo hadda isku dayi kara inay bixiyaan qandaraaskiisa lagu burburin karo £ 67m xagaaga soo aadan.
Warbixinta ayaa intaas ku dartay in city ay u badan tahay inaysan dib u soo ceshan doonin raacdadii Tottenham Hotspur ee Harry Kane , laakiin ka bixitaanka suurtagalka ah ee Bernardo Silva ayaa u furi doona boosas iibsiyo badan oo weerar ah.
Oyarzabal wuxuu durba ku faanayaa afar gool afar kulan oo La Liga ah xilli ciyaareedkan wuxuuna wacdaro ka dhigay Spain ciyaarihii Olombikada Tokyo 2020, isagoo dhaliyay seddex gool iyo labo caawin intii uu ku sii socday bilada qalinka ah.